Accueil > Gazetin'ny nosy > Pôlitika: Mifamingana sy mifanala baraka sahady
Pôlitika: Mifamingana sy mifanala baraka sahady
Izao zavatra iainan’ny Malagasy izao ve ny niafaran’ny vahoaka Malagasy ankehitriny ? Samy resy lahatra avokoa ny rehetra fa mijaly ny vahoaka, mahantra ny mponina ary manjaka ny gaboraraka sy ny kolikoly. Fanjakan’ny be sandry sy ny manana fahefana no iainana amin’izao fotoana izao. Tsy misy eto Madagasikara izany fanjakana tsara tantana izany. Lavitra ny vahoaka Malagasy izany tany tan-dalàna izany. “Resa-kehy” hoy ny tanora izany atao hoe demôkrasia sy fahafahana izany. Fanjakan’i Baroa tanteraka.
Ny zava-misy dia iaraha-mahita io fa fandrobana ny firenena no imasoan’ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Lasa mpanan-karena tampoka avokoa izay mandalo ao amin’ny governemanta ao. Mahamenatra ny firenena tanteraka ny olom-boafidy ao amin’ny parlemanta.Olona tsy miraharaha raha tsy ny bizina sy ny aferafera no mpanao lalàna ankehitriny ao Tsimbazaza ao. Isan’andro dia efa tsy hay intsony ny voalazan’ny haino aman-jery isan-karazany izay manambara ny tranga ara-piaraha-monina izay mivaralila tanteraka. Tsy tenenina intsony ny raharaha momba ny halatra mitranga isaka ny ministera. Firy moa no minisitra sy olona ambony voaresaka etsy sy eroa fa manodinkodina volam-bahoaka sy manao kolikoly ? Tsy mbola ela akory izay dia iny niarahantsika nahita tamin’ny haino aman-jery iny ny raharaha Houcine ARFA, ny raharaha ARM P (Autorité de regulation des marchés publics) tamin’ity taona 2018 ity fotsiny, izay mbola tantara be eto amin’ny fitantanam-bolam-panjakana. Lany eto ny pejy raha toa ka hiverenana avokoa ny raharaha tao anatin’ny efa-taona nisian’ny fanjakana ity izay.
Raha mivadika amin’ny resaka pôlitika indray isika dia lasa resaka ny moana sy marenina ny zava-misy eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Tsy mety mihaino ny mpitondra fanjakana intsony ny vahoaka. Avelany hanao izay tiany hatao eo ny fanjakana. Tsy raharahian’ny olona intsony izay ataony fa efa leo tanteraka izy amin’ity fitondrana ity. Efa tsy to teny intsony ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina amin’izao fotoana izao eo anatrehan’ny vahoaka. Ankilany koa nefa dia tsy matoky ny mpanao pôlitika ivelan’ny fitondrana intsony ny vahoaka. Tena resaka toerana sy vola fotsiny sisa no ataon’izy ireny. Miandry lalàndava ny fanovana governemanta ary mampirisika izany isan’andro isan’andro. Tsy mieritreritra fahasahiranam-bahoaka sy raharaham-pirenena intsony fa miandry faharavan’ny governemanta fotsiny sisa adin’izy ireo. Mody be taim-bava dia mangina tanteraka rehefa avy eo. Tsy hita izay hery mpanohitra izany. Maty tokoa i Dadamonja, Andriamanjato Richard, Germain Rakotonirainy sy ny sisa tena nanao pôlitika ary ny maro hafa koa. Ankehitriny dia lasa mpisolelaka sisa ry Manandafy Rakotonirina, Gilbert Raharizatovo, Voninahitsy Jean Eugène, Yves Aimé, Vaovao Benjamin, avy amin’ny fitenenana hoe sitrany ahay mandray kely toa izay mandry fotsiny. Nankaiza i Doudou DFP ?
Ingahy Pety Rakotoniaina sisa no mba misehoseho dia milentika indray rehefa avy eo.
Fa ny tena loza dia ny ho vokatra ny fifamelezan’ingahy Hery Rajaonarimampianina amin’i Andry Nirina Rajoelina sy Ravalomanana Marc. Mifamingana izy telo lahy ireo sy mifanala baraka ary mifampiandry kendritohana. Samy milaza azy ho tompon’ny vahoaka avokoa. Ary dia mirehareha amin’ny vola sy ny harena azo tamin’ny fotoana nitondrana ny firenena. Ny mpitondra dia mitady ny tsy hilatsahan’izy roa lahy tsy ao anatin’ny fanjakana amin’izao. Ireto roa kosa miedinedina sy mirehareha fa mbola manana hery hono. Ahiana mafy ho korontana mafimafy kokoa noho ny tamin’ny taona 2009 sy 2001 no hisy eto Madagasikara raha ny fihetsik’izy telo lahy miseho no tompon’i Madagasikara no dinihina. Efa samy manahy izany korontana izany avokoa ny rehetra ka tokony handini-tena izy telo lahy ireo.